DEGDEG: Al-Shabaab oo weeraray Jabuutiyaanka Heysta Jalalaqsi. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Jun 8, 2019 413 0
Ciidamo ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamada Jabuuti ee heysta degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan.
Wararka halkaa naga soo gaaraya ayaa sheegaya in Jabuutiyaanka lagu helay meel u dhow buundada magaalada halkaasoo uu dagaal ka dhacay, balse ugu dambeyntii Jabuutiyaanka ayaa ku qasbanaaday iney goobka ka cararaan waxayna toos u galeen xeradii ay degganaayeen.
Iyagoo ka baqanaya in xerada lagu soo weeraro ayaa waxay billaabeen iney afarta jiho madaafiic u qubaan, lama oga haddii ay dad shacab ah wax ku noqdeen madaafiicda maadaama dhacdadu cusub tahay.
Dhanka kale, faahfaahin ayaa kasoo baxaysa weerar Kamiin ah oo shalay ka dhacay inta u dhaxaysa Jalalaqsi iyo Buuloburde kaasoo ay ciidamada Al-Shabaab u dhigeen askar ka tirsan kuwa H/Shabelle.
Ciidanka dhabbaha loo galay ayaa si dhuumaaleysi ah uga baxay Jalalaqsi iyagoo qaaday dhanka wabiga jiinkiisa laakin saasoo ay tahay meel dhexe ayaa lagu helay, waxaana inta la hubo laga dhaawacay labo askari.
Ciidamadan ayaa ugu dambeyn ku qasbanaaday iney dib ugu laabtaan jalalaqsi iyagoo dhaawacyadoodii wata. Askarta Jabuutiyaanka, Xabashida iyo kuwa Soomaalida ee la shaqeeya ayaa waxaa ku aday iney sahayda is gaarsiiyaan oo ay ku socdaalaan wadooyinka gobolka Hiiraan.